Akụkọ - Nabata 47th CIFF
Nabata na 47th CIFF
Amalitere na 1998 na ndị ngosi 384, oghere ngosi nke mita 45,000 na ndị bịara ihe karịrị 20,000 ndị na-azụ ahịa, CIFF, China International Furniture Fair (Guangzhou / Shanghai) enweela ihe ịga nke ọma maka nnọkọ 45 wee mepụta ahịa kachasị amasị ụwa. ikpo okwu maka mmalite ngwaahịa, ire ụlọ na ahia mbupụ na ụlọ ọrụ na-enye ọkụ.
Tọrọ ntọala ma mepụtara maka afọ 17 na Guangzhou, malite na Septemba 2015 ọ na-eme kwa afọ ma na Guangzhou na Machị na Shanghai na Septemba, ụlọ ọrụ azụmahịa abụọ kachasị ike na China.
Azu ahia ohuru iji wusi ulo oru ulo oru ulo Site na 2021
“Uzo atumatu, ahia zuru uwa, uzo ahia” bu isi okwu ohuru nke CIFF Guangzhou na-eweghachi onwe ya iji nyere aka mmepe ulo oru a gbasara oria ojoo zuru uwa.
Mpempe akwụkwọ 47th nke China International Furniture Fair, isi ihe eji emepụta arịa ụlọ na 2021 na China, ga-akwado ịkwalite uru nke imepụta ma mepụta ụdị azụmaahịa ọhụụ gbasara ihe omume dị ugbu a na iwu ọhụrụ nke egwuregwu ahụ. Ihe nlere di iche na nmekorita nke di n’etiti ahia di iche na nke ozo nke mbupu, ya na ntinye nke intaneti na ntaneti iji nye ihe ngosi ihe ngosi zuru ezu nke zuru oke nke n’egosiputa ulo oru ulo oru nile, na akwado nkwado ya mgbe nile. nke ndị na-eme ihe ngosi na ndị ọbịa.
A ga-eme CIFF Guangzhou 2021 na nkebi abụọ nke ngalaba ngwaahịa na-ahazi: nke mbụ, site na 18 ruo 21 March, raara onwe ya nye ụlọ, ụlọ n'èzí na oge ezumike, na-enye ngwa na akwa; nke abụọ, site na 28 ruo 31 Machị, maka arịa ụlọ ọrụ na oche, ụlọ nkwari akụ, arịa ọla, arịa maka ebe ọha na ebe na-echere, ngwa, akụrụngwa na igwe maka ụlọ ọrụ arịa.
Ekpuchita a ngụkọta nke ebe 750,000 square mita, na China Import na Export Fair Complex na Guangzhou na-atụ anya ka a nọrọ n'ụlọ 4,000 ụlọ ọrụ na 300,000 ahia ọbịa.
Ọganiihu nke mbipụta abụọ nke 2020 ikpeazụ nke CIFF, nke emere na July na Guangzhou na Septemba na Shanghai, n'oge dị mgbagwoju anya n'akụkọ ihe mere eme enyela ndị na-ahazi ọrụ ego, ọrụ siri ike, na ntinye aka na-enye ndị isi egwuregwu ụlọ ọrụ ihe ọhụụ ọhụụ , ihe ohere.
CIFF si otu a gosipụta ọkwa ya dị ka azụmaahịa azụmaahịa kachasị mkpa na ahịa Eshia, ihe omume a na-agaghị ekwe omume nke ụdị ndị kacha mma ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ nwere atụmatụ mara mma na echiche ọhụụ na usoro kachasị ọhụrụ na ahịa na-aga ngwa ngwa n'ịchọ elu -ezi okike meputara, mejuputara ya site na ihe omume di uku na asọmpi imewe
Mmadụ Bịa ka anyị ngosi ụlọ ndò!
Atesbọchị & Oge Awa
Maachị 18-20, 2021 9:30 am-6:00 pm
Maachị 21, 2021 9:30 am-5:00 pm
Ebe Poly World Trade Center Expo